सामग्री मार्केटिंगको मूल्यांकनमा Semalt अंतर्दृष्टि
मार्केटिंग रणनीतिहरू जहिले पनि आवश्यक हुन्छ। कति पटक हामीले "SEO मरेको छ" भनेर सुनेका छौं? हजारौं पटक। जे होस्, एसईओ को विकास समाप्त छैन, यो केहि फरक मा रूपान्तरण राख्न।
हाल, SEO indisolubly सामग्री मार्केटिंगको साथ सम्बन्धित छ। यदि तपाईं सहि गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो मामला हुनु पर्छ। सामग्री मार्केटिंगले वेब मार्केटिंगमा एक महत्त्वपूर्णको रूपमा यसको ब्रान्ड निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ। यदि तपाइँ अनुकूलन गरिएको, सान्दर्भिक, र मूल्यवान सामग्रीको साथ तपाइँको मार्केटिंग सामग्री उत्तेजित गर्न सक्नुहुन्छ, तब तपाइँ बढि यातायात, ब्रान्ड मान, र अन्तमा, लगानी मा ठूलो प्रतिफल को रूप मा पुरस्कार कटनी गर्नेछ।
Semalt को ग्राहक सफलता प्रबन्धक निक Chaykovskiy, कसरी तपाइँको व्यवसाय को लागी सामग्री मार्केटिंग रणनीति को अधिकतम बनाउन को लागी व्याख्या गर्दछ।
कसरी तपाईं कसरी उफ्रिने फाइदाहरू निर्धारण गर्ने?
अन्त्यमा, विशाल प्रभावहरू र बढेको ट्राफिकले श्रोताको वार्तालाप दरहरूमा बृद्धि गर्दछ, जसले महत्वपूर्ण नाफा मार्जिनमा पुर्‍याउँछ। यो अन्तिम उद्देश्य हो। यो के यो मूल्यवान हुन्छ।
तर जब हामी सतह प्यारामिटरहरू भन्दा बढि ध्यान केन्द्रित गर्छौं, वास्तवमै आवश्यक कारकहरू ध्यानमा राख्दैनन्। अन्य सर्तहरूमा, तपाइँ कसरी आफ्नो सामग्री मार्केटिंग मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ र यससँग सम्बन्धित लगानीमा फिर्ता हुन्छ?
जब तपाईं महाद्वीप मार्केटिंग आरओआई मापन गर्नुहुन्छ, तपाईंले आफैंलाई सोध्नु पर्छ तपाईंको व्यापार लक्ष्यहरू के हुन् र तपाईं अभियान मार्फत के आशा गर्नुहुन्छ? यसमा तपाईंको प्रतिक्रियाले मेट्रिक्सलाई सूचित गर्दछ जसमा तपाईं ध्यान दिनुहोस्। यसका केही जानकारीहरू कब्जा गर्न सजिलो हुन सक्छ; अन्य जानकारी जटिल हुन सक्छ र सामग्री प्रदर्शनको एक विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
सामग्री मार्केटिंगको सन्दर्भमा, यहाँ केहि मेट्रिक्सहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ:
तपाईंको व्यवसायमा मार्केटिंग खर्चको नतीजामा उत्सुक हुनुहोस्।
तपाइँको सामग्री प्रसारित गर्दा तपाइँ के खर्च गरिरहनु भएको छ ट्र्याक राख्नुहोस्।
राजस्व बढेको छ
नाफामा बृद्धिले आधार बनाउँछ जसमा तपाईं आफ्नो सामग्री मार्केटिंग हस्तक्षेपको स्थिरता मूल्यांकन गर्नुहुन्छ।
वेबपृष्ठमा स्क्रोल गहराई र समय
यी दुई प्यारामिटरहरू निर्धारणले तपाईंको श्रोताले तपाईंको सामग्री पढिरहेको छ कि छैन भनेर अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
गुगल एडवर्डसँग कसरी खर्च गर्ने?
गुगल एडवर्ड्स मार्फत गरिएको विज्ञापन लागतलाई विचार गरी तपाईं सामग्री मार्केटिंगमा लगानी गर्ने पूँजीलाई प्रमाणित गर्न तपाईं सक्षम हुनुपर्दछ।
यससँगै, यो कुरा ध्यानमा राख्नुहोस् कि सामग्री कुञ्जीशब्दहरूको साथ पूर्ण हुनुपर्दछ जुन तपाईं सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सीसा ल्याउँछ।
खरीद समय र पहिलो सम्पर्क बीच सहसंबंध
सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको सामग्रीलाई द्रुत रूपमा देखिन्छन् भने खरीद गर्न यसले कति समय लिन्छ भनेर निर्धारणले मार्केटि strategy रणनीतिको प्रभावकारितामा अन्तरदृष्टि दिन्छ।
यसको निर्धारणले तपाईंलाई सोशल मिडियामा उत्तम बेच्ने सामग्रीको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
दर्शकहरूको अन्तर्क्रियाको डिग्री
तपाईंले सेयरहरू, ट्वीटहरू, क्लिकहरू, र डाउनलोडहरूको संख्या विचार गर्नुपर्दछ किनकी यसले तपाईंको मार्केटिंग हस्तक्षेपहरूको सफलता दर्साउँछ।
तपाईंले एक विशेष सामग्री पढेर तपाईंको श्रोताहरू द्वारा खर्च गरिएको अवधि ट्र्याक गर्नुपर्छ।
कुन सामग्रीले वापसी दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ भनेर निर्धारण गर्दै तपाईंको मार्केटि strate रणनीतिहरूमा भोल्युम बोल्दछ।
तपाईंले सदस्यता, दृश्य, र टिप्पणीहरू मार्फत तपाईंको सामग्रीको शेल्फ लाइफ निर्धारित गर्नुपर्छ।
र पक्कै पनि दर्शकहरूको सment्लग्नता र सामाजिक शेयरहरूलाई विशिष्ट सोशल मिडिया मेट्रिक्सको रूपमा विचार गर्नुहोस्। माथि उल्लिखित मेट्रिक्स ट्राफिक, बज, र सामग्रीको प्रभाव निर्धारणको लागि महत्त्वपूर्ण छ।